Barcelona oo doonaysa inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta xiddig khad dhexe oo ka tirsan Kooxda Juventus – Gool FM
(Barcelona) 25 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ee dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay indhaha ku hayso inay u dhaqaaqdo soo xero gelinta xiddiga ka tirsan Juventus ee Rodrigo Bentancur, sida wararku ay sheegayaan.
22-sano jirkaan ayaa boos joogto ah ku yeeshay kooxdii Massimiliano Allegri ee Juve labadii sano ee la soo dhaafay, laakiin wuxuu arkay booskiisa oo qatar ku jira kaddib imaatinka xagaagan ee Adrien Rabiot iyo Aaron Ramsey.
Sida ay warinayso Jariiradda La Gazzetta dello Sport xiddigan reer Uruguay ayaa lagu heli karaa 54.9 milyan oo gini, inkastoo kooxdiisii hore ee Boca Juniors ay ku dhici doonto 50% khidmad kasta oo ay Juventus ka hesho isaga.
Bentancur ayaa 40 kulan u saftay kooxda xafidanaysa horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, laakiin waxaa loo magacaabay kursiga keydka kulankii ugu horreeyey ee Macallin Maurizio Sarri uu hoggaamiyey naadiga kaasoo ay xalay la ciyaareen Parma.
Tababare Sarri ayaa taas bedelkeeda waxa uu u doortay khadka dhexe, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic iyo Sami Khedira safarkooda Stadio Ennio Tardini.
Kooxda Barcelona ayaa durbadiiba xoojisay khadkeeda dhexe xagaagan, iyadoo la soo wareegtay Frenkie de Jong kaasoo kaga yimid Naadiga Ajax.